Qofkii Ugu Horreeyay ee Dunida oo Sugaya in Qalliin Lagu Bedalo Madaxiisa(Sawirro) | Shabakada Gabooyaha
Suurtogal matahay in madax lagu tallaalo shakhsi kale? September tan soo socota ayaa suurtogal ah in la isku dayo qalliinkii ugu horreeyay ee noocaa ah.
Ninkan magaciisa waxaa la yiraahdaa Valery Spiridonov , waa 30 jir, ma awoodo inuu cagihiisa ku socdo, cudurka Werdnig-Hoffman disease oo ku dhacay darteed, kaas oo jirka oo dhan ka fariisiyay dhaqdhaqaaq shaqo oo aanuu qofku isnuuxin karin, nolol dabiici ahna aanuu ku noolaan karin.
Dhakhtarka laga yaabo inuu qalliinkan sameeyo ayaa la yiraahdaa Dr.Sergio Canavero, dhakhtarkan dadku waxay ku naaneysaan Doctor Frankenstein, waana sida uu ninkan bukaanka ahi sheegayo, waxaa qalliinka la fulinayaa bisha Septembe.
Dhakhtarka ayaa dhankiisa sheegay; inuu aad uga cabsi qabo in qalliinka noocan oo kale lagu guuleysan karo, maadaama uu yahay mid cusub horyna aan loogu tijaabin qof bani’aadam ah.
Si kastaba, ninkan bukaanka ah ee madaxiisa iyo maskaxdiisuba ay u fayowdahay ayaa go’aansaday inuu madaxiisa ku dooqo oo ugu deeqo qof kale oo bukaan ah oo aan rajo laga qabin inuu madaxiisu u fiicnaado.